Barcelona oo shaaca ka qaadday qiimaha ay ku iibineyso Griezmann & Ingiriiska oo looga gacan haatinayo – Gool FM
(Barcelona) 26 Mar 2020. Antoine Griezmann ayaa xagaagii aynu soo dhaafnay Barcelona kaga soo qaadatay Atletico Madrid 110 Milyan oo gini, hase ahaatee, ma aysan shaqeyn ujeeddadii ay Barca u soo qaadatay laacibkan taasoo keentay inay hadda suuqa geeyaan.
Kooxda reer Spain ayaa diyaar u ah inay aqbasho qiimo gaaraya 90 Milyan oo gini oo ay ku iibinayaan weeraryahanka Faransiiska ah xagaagan kaddib markii uu ku guuldarreystay inuu kasoo iftiimo garoonka Camp Nou.
Kooxda Manchester United ayaa la filayaa inay u dhaqaaqi doonto saxiixa 29-jirkan maadaama loo sheegay qiimaha lagu heli karo, xilli uu bar-tilmaameed hore u ahaa kooxda Old Trafford ka dhisan.
Griezmann ayaa lala xiriiray Red Devils sanaddii 2017, waxaana lagu soo warramayaa in United ay xagaagan u dhaqaaqi doonto qaabkii ay kusoo qaadan lahayd, inkastoo ay loollan kala kulmi doonto kooxaha Arsenal iyo Paris Saint-Germain.
Keliya siddeed gool oo La Liga ah ayuu ku tirsanayaa kooxda Barca isagoo u ciyaaray 26 kullan, halka tartamada oo dhanna uu dhaliyay 14 gool, taasoo la micno ah inuusan la imaan qaab ciyaareedkii ay kooxdiisa ka filaneysay.
Barcelona ayaa bar-tilmaameed ka dhiganeysa in Neymar Jr ay kusoo celiso garoonka Camp Nou, halka tiradana ay ku darsadeen Lautaro Martinez oo ka tirsan naadiga Inter Milan.
Si labadaas saxiix ay u sameyso, Barca ayaa suuqa geyneysa xagaaga Antoine Griezmann iyo Philippe Coutinho si ay uga hesho iibkooda lacag fiican oo ay kula soo saxiixan karto labadeeda bartilmaameed.